सञ्जीवको ब्लग: 2014
गढिमाई -हाम्रो गौरव कि लज्जा ?!
हरेक पाँच वर्षमा आउने गढिमाई मेला अर्को महिना बाराको बरियारपुरमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । विगत झैँ यो वर्ष पनि नेपाल र विशेषगरि भारतबाट मेला भर्न आउने भक्तजनले अनुमानित ५ लाख पशुपंक्षी गढिमाईलाई 'चढाउने' छन् । जीवनमा सुखसमृद्धि प्राप्त गर्न र यसका लागि गढिमाईलाई सन्तुष्ट बनाउने उद्देश्यले गरिने पशुबलिको कार्यक्रम २ हप्तासम्म चल्नेछ ।
Posted by Sanjeev at 10:35 AM2comments:
ढोगाउनुहोस् श्रीमतीलाई खुट्टा !
आजभोलि समसामयिक घटना र त्यसमा हुने बहसमा सहभागि हुन मन लाग्दैन । जीवन/जगतलाई हेर्ने मेरा दृष्टिकोण फरक छन् । धेरैलाई यो मन पर्दैन भन्ने बुझेको छु । अलि पर बसेर मानिसका टिप्पणी र जवाफ सुन्नमात्र मन लाग्छ ।
तर, कुनै अनलाइन समाचारमा प्रकाशित श्रीमानले श्रीमतीका खुट्टा ढोगाएको तस्वीरका विषयमा भइरहेका टिप्पणी हेरेर यो संयम क़ायम राख्न सकिन । कर्तव्यका रूपमा भएपनि केही लेख्न मन लाग्यो ।
Posted by Sanjeev at 5:28 AM 1 comment:
Posted by Sanjeev at 4:28 PM 1 comment:
गाई, आस्था, राष्ट्र
ज्ञान सम्भवत मानिसको सबल पक्ष हो, र आस्था दुर्बल ।
जब आस्थाको कुरा आउँछ त्यसबेला मानिसको दुर्बल पक्ष छतछुल्ल हुन्छ । ऊ तर्क र विवेकलाई पाखा लगाएर आफ्नो आस्थाको संरक्षणमा जुट्छ । ज्ञान र परिवर्तनप्रतिको उसको लगाव पग्लिन्छ । मानिस बिल्कुलै निरिह देखिन्छ ।
Posted by Sanjeev at 11:52 AM 1 comment:
आइमाई, महिला, नारी
आइमाई शब्दको प्रयोगले रमाइलो माहोललाई नरमाइलो बनाएका केही अनुभव छन् । गफगाफ र औपचारिक कुराकानीमा पुरुष र कहिलेकाहिँ महिलाले फ्याट्ट आइमाई भनिदिँदा अन्य महिलाले नमिठो मान्छन् । कहिलेकाहिँ यो नमिठो अनुभव मनमा मात्र राख्छन् तर कहिलेकाहिँ यसको कडा र ठाडो प्रतिवाद गर्छन् । औपचारिक कार्यक्रममा महिलालाई आइमाई भन्दा बोल्नेले माफी नै माग्नुपरेको पनि देखिन्छ कहिलेकाहिँ ।
Posted by Sanjeev at 5:17 PM 1 comment:
मोदी उदयले जन्माएका प्रश्न
भारतको चुनावमा नरेन्द्र मोदीको विजयका विषयमा विभिन्न कोणबाट फरक-फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । कसैले यसलाई स्वभाविक र सकारात्मक भन्दै यसलाई उनको विकास र सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धताको परिणाम भनेका छन् भने अन्यले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको नेतृत्त्वले भारतीय राजनीति र समाजमा धार्मिक अतिवादलाई बढावा दिने आकलन गरेका छन् । मोदीका विरोधीहरूले उनको विजयलाई अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत समूहहरूको 'पराजय'का रूपमा पनि चित्रित गरेका छन् ।
Posted by Sanjeev at 9:24 AM No comments:
समस्या नकारात्मक सोच कि असक्षम राज्य ?!
नेपाल किन बन्न सकेन ? के गर्दा बन्न सक्थ्यो ? र, बनाउनलाई अब के गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा प्रशस्त टिप्पणी भइरहेका छन् । देश विकासका विषयमा केन्द्रीत यो बहस समृद्धिको हाम्रो लक्ष प्राप्तिमा कतिको सहायक होला त्यो हेर्न बाँकी छ । यसो भए तापनि अहिलेको बहसको एउटा सकारात्मक पाटो छ । राजनीतिक दलका नेताले मात्र विचार दिने र अरूले त्यसैको वरिपरि बहस गर्ने हाम्रो पूरानो चलन भत्काउनमा थोरै भए पनि यसले सहयोग गरेको छ । सर्वसाधारण मानिस मुलुकको परिवर्तनका विषयमा ठोस छलफल गर्न इच्छुक हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
Posted by Sanjeev at 1:21 PM No comments:
Posted by Sanjeev at 9:59 AM No comments:
Posted by Sanjeev at 3:45 PM 1 comment:
[हिँजोको 'सरकारले बनाओस् क्रिकेट स्टेडियम' भन्ने ब्लगमा विवेक पौडेलले टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ । उहाँले टिप्पणीमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएकाले त्यसको जवाफ आवश्यक ठानेँ । तलको विवेकजीको टिप्पणी र अलि तलको मेरो जवाफले यहाँका पनि प्रश्न र चासोहरूलाई समेट्ने आशामा नयाँ ब्लगपोस्ट बनाएको छु ।]
Posted by Sanjeev at 8:20 AM No comments:
Posted by Sanjeev at 6:34 PM 1 comment:
विकास सम्भव छ
पत्रकार सुशील शर्माको कान्तिपुरमा माघ २५ गते छापिएको ‘नेपाल किन बन्न सकेन’ भन्ने लेख पढेपछि मनमा आएका केही कुरा प्रस्तुत गरेको छु । उहाँजस्तै म पनि विकास विज्ञ होइन, यस विषयमा सामान्य रुचि राख्ने व्यक्तिमात्र हुँ । मेरो आशय पनि समाधान प्रस्तुत गर्ने होइन । उहाँले उठाउनुभएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई केही फरक स्वरूपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा मेरो उद्देश्य पूरा हुनेछ ।
Posted by Sanjeev at 5:28 PM2comments:
भ्रम १. देश हुनको लागि सहिद चाहिन्छ ।
'देश' वा आधुनिक राज्य निर्माणका क्रममा भएका संघर्षमा मानिसहरूले चाहेर नचाहेर ज्यान गुमाएका हुन् । तर, सहादत देश बन्ने प्रकृयाको 'आधार' हैन । सबै देश मानिसको रगतको जगमा उभिएका छैनन् । सहिदका बारेमा राज्यले नागरिकलाई गलत पाठ पढाएका छन् ।
Posted by Sanjeev at 5:00 PM2comments:
इतिहासमा रुचि हुनेहरूले जान्नुपर्ने कुरा यो पनि हो कि ‘घटना’हरू शून्यमा घट्दैनन्। इतिहासमा घटेको कुनै घटनाको आर्थिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हुन्छन्। पृष्ठभूमिको यथेष्ट विश्लेषणबिना इतिहासको चर्चा अर्थहीन बकबकमात्र हुन्छ -जसरी हरेक वर्ष पुस २७ गतेको वरिपरी हुनेगर्छ।
भीमसेन थापाले कुन वर्ष, कति मानिस लगाएर कति अग्लो धरहरा बनाए ? भन्ने विवरण इतिहास हैन। इतिहासको एउटा घटना हो। त्यो निश्चित समयमा कुन अभिप्रायले धरहरा बनाइयो? धरहरा निर्माणका आर्थिक र सामाजिक आधार के-के थिए? धरहराले भीमसेन थापालाई के उपलब्धि दिलायो –आदि विषयहरूको विश्लेषण नै सही अर्थमा इतिहास हो।
प्रशिद्ध बेलायती इतिहासविद R. G. Collingwood ले भनेका छन् - हामीले थाहा नपाएको विवरण प्रकाशमा ल्याउने मात्र इतिहासको उद्देश्य हैन, इतिहासले विगतका घटनाका बारेमा हामीले बुझेकोभन्दा पृथक विश्लेषण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
अङ्ग्रेजी भाषामा philosophy of history भनिने यो प्रकारको इतिहास लेखन वा इतिहासको बुझाइ हामीमा त्यति व्यापक छैन, जति हुनुपर्ने हो । महेशचन्द्र रेग्मी, ऋषिकेश शाह, बाबुराम आचार्य र लडविग स्टिलर, प्रत्यौष वन्त जस्ता केही इतिहासकारहरूको लेखनमा पाइने इतिहासको यो चेतको प्रभाव विश्वविद्यालयका चारपर्खालबाहिर आउनसकेको छैन ।
हामी अझ पनि तिथिमिति र अभिलेखमा अल्झिएको कोरा विवरणलाई मात्र इतिहास मान्छौँ घटनाहरूका पृथक र संभावित विश्लेषणहरूमा ध्यान दिन्नौँ । बरु सकिन्छ भने इतिहासका पात्रहरूलाई जस वा अपजस दिएर मनको कुण्ठा शान्त पार्छौँ ।
इतिहासप्रतिको चेत सबैभन्दा उराठलाग्दो रूपमा प्रस्तुत हुने ‘पृथ्वी जयन्ती’को वरिपरी पनि हो । यो दिनलाई विशेष राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने वा यही मौकामा पृथ्वीनारायाणलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा हुनेगरेको इतिहासको अपमानलाई प्रदर्शित गर्छ। पृथ्वीनारायणलाई जस र अपजस भिराउने हाम्रो भद्दा र पूरानो चलनको निरन्तरताले इतिहासलाई बुझ्ने हैन आफ्नो साँघुरो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने हाम्रो गलत परम्परालाई उजागर पनि गरिरहेको छ ।
के कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी छ भने पृथ्वीनारायणले अहिलेका नेपालीहरूका अपेक्षा र चासोलाई मनन गरेर झण्डै २५० वर्षअघि नेपालको एकीकरण गरिदिएका हैनन् । उनको ‘राज्यविस्तार’को अभियान यस क्षेत्रको विशिष्ट भू-राजनीतिक परिस्थिति; त्यसबेलाका राज्यहरूको बाह्य विश्वसँगको आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तन; र अन्य विभिन्न स-साना संयोगहरूको उपज हो –जसका बहुआयामिक पक्षहरूका प्रशस्त व्याख्या र विश्लेषण हुनसक्छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहका पालामा आजको जस्तो राज्यसँग जोडिएको नागरिक पहिचानको विकास भइसकेको थिएन। राज्य र नागरिकबीच बलियो पारस्परिक सम्बन्ध थिएन। राज्यप्रति राजा उत्तरदायी थिएनन्। राज्य राजा वा शासकको 'कमाइ' थियो जसको गरिमा उनीहरू र उनीहरूको वंशसँग सीमित थियो।
पृथ्वीनारायण शाह वीर, चलाख र दूरदर्शी शासक थिए होला -तीन शताब्दीपछि मानिसहरूले गौरव गरुन् भनेर अवश्य पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाएका होइनन्।
पृथ्वीनारायणले नेतृत्व गरेको नेपाल राष्ट्रको विस्तार धेरैले भन्ने गरेजस्तो न त कुनै व्यक्तिविशेषको वीरता र अभूतपूर्व दुरदर्शीताको परिणाम हो न त षड्यन्त्रको ग्राण्ड डिजाइन! निश्चित कालखण्डको इतिहास अन्तर्सम्बन्धित सन्दर्भहरूको परिणाम हो जसले व्यक्तिविशेषका क्षमता र संभावनाहरूलाई ‘स्पेस’ दिएको हुन्छ। इतिहासको हाम्रो विश्लेषण यिनै ‘सन्दर्भ’मा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, हामीलाई पृथ्वीनारायण भन्ने ‘व्यक्ति’प्रति यति धेरै चासो छ कि हामी त्यसबेलाको सन्दर्भमा पुग्ने आवश्यकता नै देख्दैनौं।
इतिहास हाम्रा लागि ‘ठालूहरूको दिनचर्या’मात्र भएको छ । इतिहासप्रतिको हाम्रो चासो राजा-महाराजाहरूका ‘वीरता’ र ‘बहुलठ्ठी’को कोरा विवरणमा रुमल्लिएको छ । त्यसैले, हामी अधिकांश समय मिथकलाई इतिहास र इतिहासलाई मिथक बनाउँछौं । पुस २७ गतेका दिन पृथ्वीनारायण शाहका पक्ष र विपक्षमा हुने अधिकांश बहसले यो तीतो यथार्थ उजागर गरेका छन् ।
इतिहास एक अर्थमा वर्तमानको पनि उपज हो । हाम्रा अहिलेका चासो र आग्रहहरूले पनि इतिहासको व्याख्यालाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । इतिहास लेख्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्नेका आ-आफ्ना उद्देश्य र अभिरुचि हुनसक्छन् । यी परिवर्तनशील अभिरुचिहरूको ‘चियोचर्चो’बिना इतिहासको अध्ययन पूरा हुँदैन ।
तर, साँघुरो स्वार्थ पूरा गर्ने हेतुले इतिहासलाई अनावश्यक गिजल्ने काम पनि शोभनीय हैन ।
यहुदीहरूप्रतिको प्रतिशोध शान्त पार्न सन् २००६ को डिसेम्बरमा तत्कालिन इरानी राष्ट्रपती अहमदिनेजादले “दोश्रो विश्वयुद्धका दौरान यहुदीहरूमाथि भएको अत्याचारको विश्वसनीयतामाथि छलफल गर्ने” नाममा एक ‘अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार’को आयोजना गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहलाई अपराधी वा राष्ट्रनिर्माता पुष्टि गर्न वर्तमानका रिसरागको हतियार प्रयोग गर्नेहरूले यही शैली पछ्याइरहेका होलान्। इतिहासलाई गहना वा हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने काम सभ्य समाजका लागि शोभनीय हुन्न ।
राजामहाराजाका शालिकमा अबिर, माला पहिराएर इतिहासको स्मरण गर्ने वा आफ्नो कुण्ठा शान्त पार्न मरेर गएकालाई गाली गर्ने हाम्रो विशिष्ट परम्परालाई पछ्याउँदै आज पनि नेपालमा पृथ्वीजयन्ती मनाइने छ । तर, इतिहास स्मरण गर्ने वा त्यसका पात्रलाई गाली गरेर मन शान्त पार्ने माध्यम हैन ।
इतिहासको पूर्वाग्रहरहित विश्लेषण सभ्य समाजको परिचायक हो । भनिन्छ राम्रो काम सुरु गर्न कहिलै ढिलो हुँदैन ।
Posted by Sanjeev at 7:49 AM No comments:
Posted by Sanjeev at 11:03 AM4comments:
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमतको ठूलो महत्त्व हुन्छ । तर, लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन वा मतदानमात्र हैन । राज्यका अवयवहरू लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुरूप इमानदार र प्रभावकारी ढङ्गले चल्न नसके निर्वाचन आफैंले वा भनौं यसबाट अभिव्यक्त जनमतले मात्र सुशासन सुनिश्चित हुन सक्दैन ।
Posted by Sanjeev at 2:50 PM No comments: